बालेन मिसनमा नयाँ ईटा थपियो, मन्त्री झाँक्रीले चालिन् कडा कदम ! - Mitho Khabar
बालेन मिसनमा नयाँ ईटा थपियो, मन्त्री झाँक्रीले चालिन् कडा कदम !
June 4, 2022 mithokhabarLeaveaComment on बालेन मिसनमा नयाँ ईटा थपियो, मन्त्री झाँक्रीले चालिन् कडा कदम !
काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन नयाँ जनप्रतिनिधीका टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र साह यो समस्या समाधानका लागि उपमेयरसहित अहोरात्र खटिएका हुन् । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पछिल्लो कदमले बालेन मिसनमा एउटा इटा थपेको छ । यसैबीच, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौंको फोहोरलाई वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गर्ने बताएकी छन् ।
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग माग्न मन्त्रालय पुगेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह र उपमेयर सुनिता डंगोलसँगको भेटमा उनले फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । मन्त्री झाँक्रीले बञ्चरे डाँडामा व्यवस्थित तरिकाबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।
‘बञ्चरेडाँडा वा सिसडोल नगएका मानिसहरुका लागि सामान्य कुरा लागेपनि त्यहाँ गएकाहरुका लागि यो ठूलो कुरा हो । हामीले त्यति ठूलो गल्ती गरेका छौँ । त्यसको पेव्याक आज राज्यले गरेको छ । फोहोर बञ्चरे डाँडा नै लैजाने हो, त्यसलाई हामीले वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ’ उनले भनिन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले मन्त्रालयले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरेको प्रतिवद्धता समयमै पूरा गर्न आग्रह गरे । ‘हजुरहरुले भन्नुभएको कुरा समयमै हुनुपर्छ । टेण्डरको प्रोसेसदेखि बाटो बनाउने कुरासम्म’ उनले भने ।
भेटमा बञ्चरे डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटबाट सिकेको पाठबाट अघि बढेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि योजनाका बारेमा कुराकानी भएको थियो । सरकारले स्थानीयका माग पूरा नगरेको र उचित तरिकाले व्यवस्थापन नगरेको भन्दै बञ्चरे डाँडावासीले फोहोर फाल्न दिएका छैनन् ।
जसकारण लामो समययता काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन । काठमाडौंका सडकमा जताततै फोहोरको थुप्रो देख्न सकिन्छ । यसअघि काठमडौंका नवनिर्वाचित मेयर बालेन साहले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरेर मात्रै महानगरका अन्य काम गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सिसडोलवासीका समस्या बुझ्न मेयर र उपमेयरसहितको टिम शुक्रबार सिसडोल पुगेका छन् ।
May 9, 2022 mithokhabar
भक्तपुरबाट पक्राउ परे नेपालमा काेराेनाबाट मृत्यु भयो भन्दै हल्ला फैलाउने थापा